अमेरिकाका खतरनाक ड्रग तस्करबारे नयाँ खुलासाहरू ! – E Kutumba
अमेरिकाका खतरनाक ड्रग तस्करबारे नयाँ खुलासाहरू !
By ईकुटुम्ब On Apr 5, 2021 0
न्युयोर्क अमेरिकाका सबैभन्दा खतरनाक ड्रग तस्कर फ्रयाङ्कलुकासबारे केही नयाँ खुलासाहरू भएका छन ।
फ्रयाङ्क लुकास ड्रग डिलर हुन् । जो आफ्नो काम पूरा गर्नका लागि कुनै पनि हदसम्म जान सक्थे ।
चाहे आफ्नो कामका लागि उनले कसैको ज्यान नै लिन किन नपरोस् । लुकासले गरेका तस्करीलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो संगठित अपराध मानिन्छ ।
६ वर्षको छँदा आफ्नै अगाडि दाजुलाई केही व्यक्तिहरुले मारेको विभत्स घटना फ्रयाङ्कले प्रत्यक्ष देखे । भनिन्छ, यस घटनापछि फ्रयाङकको जिन्दगी पुरै बदलिएको थियो । घरमा कमाउने व्यक्ति कोही नभएकाले उनको जिन्दगी बिस्तारै मुस्किल बनिरहेको थियो, त्यसपछि घरको हालत सुधार्नका लागि फ्रयाङ्क आफैं अघि सर्नुप७थभलसयो ।
सानै हुँदा उनले भोक मेटाउनका लागि पहिलो पटक खाना चोरे । फ्रयाङ्कको आपराधिक दुनियाँ सयर यहीबाट सुरु भएको थियो । समयसँगै यो बढ्दै गयो । फ्रयाङ्कले लगातार चोरी गर्न थाले । कहिले पसलहरुबाट सामान, त कहिले रक्सी खाएकाहरुको गोजीबाट उसले पैसा चोर्न थाले ।
फ्रयाङ्क एक ठाउँमा जागिर गर्थे । एक दिन मालिक त्यस पसलमा नभएको मौका पारेर उनले ४ सय डलर गरे । यसपछि मालिकले पुलिसलाई उजूरी गरे, अनि पुलिस फ्रयाङ्कको घर पुगे । पुलिसबाट बच्नका लागि फ्रयाङ्क तुरुन्तै भागे र फेरि फर्किएर कहिल्यै घर आएन । -एजेन्सी
२३ वर्षीय युवतीले जन्माइन् ११ बच्चा !
महिलाहरूको जीवनको मूल्य त खच्चरको भन्दा पनि कम रहेछ‘